काठमाडौँ उपत्यका मा, बाग्मती जति नै फोहोर देखिन्छ, त्यही बाग्मती तराई झरेपछि उति नै स्वच्छ र निलो देखिन्छ । काठमाडौँ देखि दक्षिण बग्दै जाँदा, बाग्मती मा मिसिएका फोहोरहरु, सायद बाटै मा पच्छन् होला र त, तराई मा पुग्दा निकै सङ्लो र निलो देखिन्छ । धेरै जना ले सोध्ने प्रश्न, ‘यो त्यही काठमाडौँ मा देखिने बाग्मती हो त?’
रौतहट र सर्लाही जिल्ला को सिमा मात्र नभइ, नारायणी र जनकपुर अञ्चल को सिमा पनि बाग्मती नै हो । पूर्व पश्चिम राजमार्ग, माथि रहेको बाग्मती पुल !
बाग्मती सिचाइँ आयोजना यहीँ नै रहेको छ, पर देखिएको बाग्मती ब्यारेज हो । त्यहीँ बाट सर्लाही तथा रौतहट का भागहरु मा सिँचाइ को लागि, नहर को निर्माण गरिएको छ । बाग्मती बाट निकालिएका नहर, जहाँ को पानी सिँचाइ को लागि प्रयोग गरिन्छ।
बाग्मती प्रदुषित भयो भनेर कराएको धेरै वर्ष भइसकेको छ, तर काम गरिएको छैन, ढल, मल सबै त्यही बाग्मती मा मिसाएका छन्, काठमाडौँवासी ले । बाग्मती नदी, काठमाडौँ मै सफा भइदिने हो भने, बाग्मती को सुन्दरता अझै बढ्ने थियो अनि बाग्मती सभ्यता बाँचिरहने थियो ।
Dharmaraj February 15, 2010 at 4:00 AM
ओहो' म पनि confused मा थिए हो highway बाट पूर्व भास्सिदा बाटोमा 'बागमती' त लेखेको हुन्थ्यो तर त्यो तेही काठमाडौं को ढलमती हो कि यो अर्को छुट्टै बागमती हो भनेर.... । साच्चै चोभारको गल्छी बाट झरेपछी काठमाडौं को 'ढलमती' कहाँ पुगेर 'बागमती' हुन सुरु गर्छ हो ? हँ आकार ब्रो ?
It's amazing to believe this is the same Bagmati flowing out of KTM...I wish it was this clean inside KTM too :(
Prabesh February 15, 2010 at 9:12 AM
तराईको बागमती हो ? कति राम्रो छ है त्यहाँ....
पहिला सङ्कटकालको बेला ओरालेर हिँडाउँथे नि नेपाली सेनाले त्यहाँ ।
साँच्चै पत्याउनै गाह्रो छ यहि काठमाण्डौको बागमती हो भनेर ।
Basanta February 15, 2010 at 10:09 AM
राम्रो लाग्यो यो विषय र फोटाहरु!
Dilip Acharya February 16, 2010 at 9:31 AM
आफुले देखेको बागमती र यो अन्तिम फोटोको बागमती दाँज्दा त 'हैन क्यार!' जस्तो लाग्दो रै'छ । विशेषगरी अन्तका ३ फोटोहरु हेर्दा त अचम्मै लाग्यो !
Slogan Murugan February 16, 2010 at 10:59 AM
acpmasquerade April 11, 2015 at 8:50 AM
धेरै पर पुग्न पर्दैन । बल्खुबाट तिरतरै हिँड्ने हो भने, कटुवाल दह सम्म पुग्दा वागमती अर्कै भइसकेको देखिन्छ । तर दुखको कुरो, वल्खु वारिको घु:मुत र रासयानिक प्रदुषणका कारण कति त्राही त्राही छ वाग्मती त्याहाँ पुगेपछि देखिन्छ । प्रकृती कति भद्र सम्म हुन सक्छ भन्ने उत्तर पनि हो यो ।